Football Khabar » ‘मेस्सीसँग तस्बिर खिचाउन’ निकारागुवाका खेलाडीको लाइन !
‘मेस्सीसँग तस्बिर खिचाउन’ निकारागुवाका खेलाडीको लाइन !
कोपा अमेरिकाको तयारीमा रहेको अर्जेन्टिनाले गत शुक्रबार मध्यअमेरिकी क्षेत्रको सानो देश निकारागुवासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो । फिफा र्याङकिङको १२९औं स्थानको टिमलाई अर्जेन्टिनाले ५–१ ले हरायो । पहिलो हाफ मात्रै खेलेका कप्तान लिओनल मेस्सीले सो खेलमा खेलको ३७औं र ३८औं गरी दुई मिनेटमा २ गोल गरे ।
फिफा र्याङकिङको ११औं स्थानमा रहेको देश अर्जेन्टिना त्यसमा पनि विश्व फुटबलका सुपरस्टार मेस्सीको टिमविरुद्ध खेलेको निकारागुवाका अधिकांश खेलाडीले मेस्सीसँग तस्बिर तथा सेल्फी खिचाउन रहर गरे । सबैजसो खेलाडीले पालो पर्खेर मेस्सीसँग तस्बिर खिचाए ।
जतिबेला रेफ्रीले खेल सकिएको सिटी फुके, लगत्तै उनीहरूले मेस्सीलाई घेरे । र, कुराकानी गर्न थाले । उनीहरूले उत्साहित भएर मेस्सीसँग कुरा गर्दै तस्बिर खिचाउन भ्याए ।
निकारागुवका खेलाडी म्यानुएल रोसासले सबैभन्दा पहिला मेस्सीसँग कुरा गर्दै तस्बिर खिचाउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि उनको टिमका सबैजसो खेलाडी ले पालो–पालो गरी मेस्सीसँग तस्बिर खिचाए ।
प्रकाशित मिति २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:५२